Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Daalibaan ayaa doonaysa in Turkigu maamulo Madaarka Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Taliban ayaa dooneysa in Turkiga uu maamulo garoonka diyaaradaha ee Kabul
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in degenaanshaha Kabul lagu soo celiyo ka hor inta uusan go'aan ka gaarin garoonka diyaaradaha, isagoo intaas ku daray inay jirto halis ah in "la nuugo" wax ay adag tahay in la sharraxo iyadoo la hubo hubsiimo ku aaddan howlgalka suurtagalka ah.
Turkiga ayaa go’aamiyay codsi ka yimid Taalibaan si uu gacan uga geysto socodsiinta gegida dayuuradaha ee Kabul.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in wadahadallada Taliban ay socdaan.
Wadahadalka ayaa lagu qabtay xarun milatari oo ku taal garoonka diyaaradaha ee Kabul halkaas oo ay ku taalo safaaradda Turkiga.
Turkiga ayaa wada -hadalkii ugu horreeyay la yeeshay Taalibaan oo ku saabsanaa gacansiinta maamulka garoonka diyaaradaha ee caasimadda maanta xarun milatari oo ku taalla garoonka diyaaradaha Kabul halkaas oo ay si ku -meel -gaar ah u deggan tahay safaaradda Turkiga.
Sida laga soo xigtay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, Ankara ayaa wali qiimeyneysay dalabka Taliban si ay gacan uga geysato hawlgalka Madaarka Caalamiga ah ee Hamid Karzai (KBL) Kabul iyo wadahadallo badan ayaa laga yaabaa in loo baahdo ka hor intaan go'aanka la gaarin.
“Wadahadalladeenii ugu horreeyay waxaan la yeelannay Taliban, oo qaatay saddex saacadood iyo bar,” ayuu yiri Erdogan. "Haddii loo baahdo, waxaan fursad u heli doonnaa inaan mar kale qabanno wadahadallada noocan oo kale ah."
Turkiga waxaa Afghanistan ka joogay boqolaal askari oo qeyb ka ah howlgalka NATO, wuxuuna mas’uul ka ahaa ammaanka garoonka diyaaradaha lixdii sano ee la soo dhaafay.
Isaga oo ka jawaabaya dhaleeceynta gudaha ee ku aaddan la -hawlgalka Turkiga ee kooxda argagaxisada, Erdogan ayaa sheegay in Ankara aysan “lahayn raaxo” si ay ugu aamusnaato gobolka aan xasilloonayn.
“Ma garan kartid waxa ay filayaan ama waxa aan ka fileyno adiga oo aan hadlin. Waa maxay diblomaasiyadda, saaxiibkay? Tani waa diblomaasiyad, ”ayuu yiri Erdogan.
Turkigu wuxuu qorshaynayay inuu gacan ka geysto sugidda iyo socodsiinta gegida dayuuradaha ee Kabul, laakiin Arbacadii waxay bilaabeen inay ciidammada kala baxaan Afgaanistaan ​​- taas oo astaan ​​u ah Ankara inay ka tanaasushay yoolkan.
Erdogan ayaa sheegay in Taalibaanku ay hadda doonayaan inay kormeeraan amniga gegida diyaaradaha, halka ay Ankara u soo bandhigayaan ikhtiyaarka ah inay maamusho saadka.
Wuxuu sheegay in labadii qarax ee ismiidaaminta ahaa ee ay ku dhinteen ugu yaraan 110 qof, oo ay ku jiraan 13 askari oo Mareykan ah, oo ku sugnaa bannaanka garoonka diyaaradaha maalmihii ugu dambeeyay ee dadaallada daadgureynta degdegga ah ee Khamiista ayaa muujisay muhiimadda ay leedahay in la ogaado faahfaahinta sida xarunta cirka loo sugi doono.
Erdogan ayaa sheegay in degenaanshaha Kabul lagu soo celiyo ka hor inta uusan go'aan ka gaarin garoonka diyaaradaha, isagoo intaas ku daray inay jirto halis ah in "la nuugo" wax ay adag tahay in la sharaxo iyadoo la hubo hubaal la’aanta hawlgalka suurtagalka ah.
“Taliban waxay tiri: Waxaan xaqiijin doonnaa amniga, adiga ayaa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha”. Wali wax go’aan ah kama aanan qaadan arrintan, ”ayuu yiri Erdogan.
Ankara ayaa ilaa hadda Afghanistan ka daadgureysay ugu yaraan 350 askari iyo in ka badan 1,400 oo qof tan iyo markii ay Taliban la wareegtay bishan.
Erdogan, oo hore u dhaleeceeyay Taalibaan markii uu dhex maray waddanka oo ku sii jeeday Kabul, ayaa sheegay in Turkigu uu higsanayo inuu sida ugu dhakhsaha badan u dhammaystiro daadgureynta iyo ka bixitaanka ciidamada.